Global Voices teny Malagasy » Kenya-Congo (RDC): Miainga Avy Amin’ny Mponina Ao An-toerana Ny Fiarovana Ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jolay 2017 18:26 GMT 1	 · Mpanoratra Samuel Maina Nandika (fr) i Fabienne Flessel, Liva Andriamanantena
Sokajy: Kenyà, R.D. Kongo, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
(Marihina fa tamin'ny 22 Janoary 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ao Lubumbashi , any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo, nitarika ireo mponina ao an-toerana handray anjara amin'ny fiarovana ny rajako, amin'ny alalan'ny fanabeazana ny foibe fiarovana ny chimpanzés  (rajako afrikana) atao hoe “Jeunes Animaux Confisqués au Katanga” na “Ireo Biby Tanora Nalaina tao Katanga” (na J.A.C.K). Mandray mpitsidika miisa 12 000 eo ho eo isam-bolana ny J.A.C.K izay tonga mba hanontany momba ireo rajako navotana, ny fiainany any anaty ala ary ny zavatra ilaina mba hiarovana azy ireo. Mpianatra tonga miaraka amin'ny sekoliny ny ankamaroan'ireo Kongoley ireo. Nanoratra tao amin'ny tranonkala “WildlifeDirect” i Roxane, iray amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny J.A.C.K  :
Resy lahatra izahay fa ny fanabeazana ihany no manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Izany no mahatonga anay tsy maintsy miasa eo amin'ny fandaharam-pampianaran'ny J.A.C.K tamin'ny taona 2009, misy ny asa maika tsy maintsy hatomboka miaraka amin'ny sekoly, nefa tsy noho ireo karazam-biby tandindonin-doza ihany fa noho ireo ankizy ankehitriny antoky ny hoavy ihany koa.
Ao Shimoni  any Kenya, manome ny mponina ao an-toerana ny fomba mivaingana kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny Les Amis de la Forêt de Shimoni (Ny Naman'ny Ala Ao Shimoni) vondrona mpirotsaka an-tsitrapo miasa ho amin'ny fiarovana ny ala ao Shimoni, miaraka amin'ny fanohanan'ny Global Vision International  – Kenya. Miara-miasa miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana izy ireo mba hitandrovana ny ala tsy ho simba.
Vao haingana izy ireo no nahavita nifandray tamin'ny vondrom-piarahamonina manodidina, izay tsy mbola tafiditra tao anatin'io asa io. Nisy ny fifanakalozan-kevitra niarahana tamin'ny vehivavy sy ny tanora tao an-tanànakelin'i Anzwani mikasika ny fomba hiarovana sy ny fampiasana ny ala miaraka ao anatin'ny lôjikan'ny fampandrosoana lovainjafy.
Afaka manamora ny fiarovana ny tontolo iainana Ny Sakaizan'ny Alan'i Shimoni raha toa ka mahavita mandresy lahatra ny mponina ao an-toerana izy ireo amin'ny fomba hafa atao mba hanoloana ny fomba fiainana miankina amin'ny fandripahana ala. Nanoratra tao amin'ny bilaogin'ny Global Vision International Kenya sy tao amin'ny WildlifeDirect i Drew, mpilatsaka an-tsitrapo avy any California : 
Ny misafidy ny fomba fiainana hafa no fomba tsara indrindra mba handrisihana ny fiarovana ny tontolo iainana ary vonona sy mazoto ny hanao izany ny mponina ao an-tanànakelin'i Anzwani. Mifankahazo tsara izahay amin'izao fotoana izao ary tsy andriko ny hiara-hiasa amin'izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/17/103609/
 Nanoratra tao amin'ny tranonkala “WildlifeDirect” i Roxane, iray amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny J.A.C.K: http://jack.wildlifedirect.org/2009/01/21/12000-visitors-a-month-for-free-at-jack/
 bilaogin'ny Global Vision International Kenya sy tao amin'ny WildlifeDirect i Drew, mpilatsaka an-tsitrapo avy any California :: http://gvikenya.wildlifedirect.org/2009/01/21/new-friends-for-friends-of-shimoni-forest/